Hadiyadda asalka ah ee gabadha
Si aad u dooratid hadiyado gabar ah dhab ahaantii waa shaqo adag. Oo dad badan ma qabtaan si fiican. Taas oo aan cabsanayn inaad maleyneyso, urta si qalad ah ayey u dooran doontaa. Ma jiraan halkan cuntada caadiga ah halkan, ma jiraan laba gabdhood oo isku mid ah. Waxaan bixin karnaa oo kaliya talooyin ku saabsan sida loo sameeyo gabar hadiyad asal ah, oo midkastaa waa sax in aad jeceshahay, waa adiga.
Waxaad haysataa dhowr siyaabood: iibso wax aan caadi ahayn, samee hadiyad gacmaheeda ah ama iibso hadiyad caadi ah, laakiin waa mid xiiso leh inaad soo bandhigto. Ama waxaad isku dari kartaa doorashooyinkan.
Soo iibso hadiyadda asalka ah - wax dhibaato ah ma laha. Internetka waxaa jira tiro badan oo ah goobo bixiya hadiyado aan caadi aheyn dhammaan mararka iyo qaybaha qiimaha kala duwan. Noocyada kala duwan ee dukaamada online-ka ah ayaa si sahlan u la yaab leh kala duwan: Dallado iyo jiirarka kombiyuutarka qaabka wadnaha, shamacyada raaxada iyo waxyaabo kale oo badan. Haddii wakhti ay socoto oo sugto ilaa amarka la keeno, ma jirto wakhti - fiirso dukaamada si aan caadi ahayn loogu talagalay, sawir muuqaal sawir leh, saacad jacayl iyo wixii la mid ah; wanaagsan, doorashada waa mid aad u xoog badan.
Fursad kale waa shahaadada hadiyado ee quruxda caadada ama foornada, ama ka sii wanaagsan - saloon qurux badan. Waad ka shakin kartaa, sida hadiyaddu waxay farxad gelin doontaa gabadha, sababtoo ah waxaad siin doontaa fursad ay ku doorto wax kasta oo jecel, xaddididda lacagta kaliya.
Hadiyadii hore ee gabadha la gacmahooda
Ku rid hadiyaddaada shaqo yar, jilicsan iyo jacayl, oo waxaa xusuusta qofka aad jeceshahay wakhti dheer. Dabcan, qof walbaa ma jeexi karo qoryaha ama alaabta jilicsan jilicsan, sidaas darteed talooyin ku saabsan sida loo sameeyo hadiyad asal ah gabar gabar ah ayaa noqon doonta mid sahlan, qofkuna wuxuu sameyn karaa wax la yaab leh.
Barkad u ah riyooyin macaan. Waxaad ku qortaa barkinta ama xargaha suufka gaar ah oo loogu talagalay dharka aqoonsiga jacaylka, dabeecada, rabitaanka, jimicsiga wadnaha, ubaxa, malaa'igta.
Salaan jacayl. Gudaha bakeeriga weyn, riix jajab, xajmiga, dabaylaha, suufka faleebo oo ku duub dhuunta quruxda leh. Baaskiil, qor "I jeclahay!" Ama wax kale oo fiican. U gee gabadha inta lagu guda jiro socodka, ka dibna si qarsoodi ah u xoqan marka ay qaban doonto.
Astaanta xusuusta. Hadiyaddan asalka ah waxaa lagu soo bandhigi karaa gabadha sannad-guurada xiriirka. Isu soo ururi wax walba oo la xiriira sheekadaada: duubista, tigidhada filimka, waraaqaha boostada, shukulaatada, ubaxyada la qalajiyey. Ku dhaji dhammaan boggaga albumka quruxda badan, xiligana leh qirasho iyo rajooyin, qurxin sawirro.
Sidee loo siiyaa hadiyad si gabar ah?
Iyo, ugu dambeyntii, dhowr talooyin ku saabsan sida loo siiyo hadiyad aad u qurux badan.
Tani waa la sameyn karaa, tusaale ahaan, iyada oo la diyaarinayo raadinta jaceylka ah ee saaxiibtiis. Aroortii u dhow sariirta, ku dhaji karid boosteejo leh qirasho, hambalyo iyo taxane ah, sida "socod lugaha sideed tallaabo dhinaca bidixda ah." Meeshan, ka dhig mid la yaab leh iyada (shukulaato ama koob kafee ah) iyo tilmaamaha ku xiga. Iyo sidaas dhowr jeer, ilaa ay gaarto hadiyadda ugu weyn.
Hadiyad yar ayaa laga heli karaa sanduuqyo dhowr ah, midka kale ee la isku qurxiyo, sida caruusadaha qashinka ah. Sanduuq kasta oo dhexdhexaad ah waxaad ku dari kartaa waxyaabo yar oo wanaagsan oo aad u fidi karto waxay ahayd mid xiiso leh.
Hab kale, sida loo siiyo hadiyad asal ah gabar. Si tartiib ah u fur furka "Kinder-yaab leh" kuna bedel alaabta lagu ciyaaro hadiyad ahaan, tusaale ahaan, giraan. Kadibna, si isku mid ah, si taxadar leh dib isugu soo celi. Inta lagu guda jiro socodka, gabadha ka iibso "Kinder-yaab" dukaanka oo ku beddel adigaa. Waxay noqon doontaa mid dhab ah, mana aha "xannaaneyn".
Maxaa la siinayaa nin si Aries?
Gifts for kids for St. Nicholas Day
Maxaa la siinayaa arooska birta ah?
Valeria - maalinta malaa'igta
Gifts for hogaamiyaha lab ah
Maalinta malaa'igta Sergei
Kharashka burcad-badeedda leh gacmahaaga
Fikradaha xiisaha leh ee Sanadka Cusub
Maalinta Ruushka - taariikhda fasaxa
Maxaa la siinayaa walaal?
Keega shukulaatada ee caano fadhi
Ku darso kursiga kursiga dheer ee kursiga
Cuntada loogu talagalay dabeecadaha - sida loo doorto soo saaraha saxda ah?
Waa maxay faa'iido badan - digaag ama turkey?
Laydhka LED for Home
Sidee loo kobciyaa isku kalsoonida?
Miley Cyrus iyo Stella Maxwell
Matxafka Taariikhiga Qaranka ee Argentina
Sababaha 37 Sababta uu Danmark ugu nool yahay dalka ugu fiican
Maxay haweenka adduunka oo dhan u jahwareerayaan Justin Trudeau?
Cimilada Spain ee bisha Oktoobar
Chebureks leh jiis
Taurus iyo Capricorn - waafaqsanaanta nolosha iyo jacaylka
Dharka loogu talagalay bisadaha
Suuxinta Qaybta Caesarean
Nashqada naqshadda - waxyaabaha cusub 2014
Motilac - analogues
Maxaad u maleyn kari wayday?
Kufsashooyinka naasaha digaaga